Podcast 2x05: Microsoft News sy efa-taona tsy misy Steve Jobs | Vaovao IPhone
Fizarana vaovao amin'ny podcast isan-kerinandro izay Izahay dia mamakafaka ny vaovao natolotr'i Microsoft, amin'ny fijerena manokana ny Surface Pro 4 sy Surface Book vaovao, fitaovana roa navotsotra hifaninana mivantana amin'i Apple iPad Pro sy MacBook. Miresaka ihany koa izahay momba ny fanovana niseho tao Apple nandritra izay efa-taona izay tsy itantanan'i Steve Jobs ny orinasa intsony. Ny hevitra ao amin'ny El Capitan, famandrihana ho an'ireo iPhone vaovao ary maro hafa koa dia misy toerana ao amin'ity podcast ity.
Henoy »2 × 05: Vaovao Microsoft ary 4 taona tsy niasa Steve Jobs» ao amin'ny Spreaker.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Vaovao IPhone » Podcast » Podcast 2 × 05: Vaovao Microsoft ary efa-taona tsy i Steve Jobs
Hermès Edition Apple Watch Unboxing [VIDEO]
Ahoana ny fomba fampidirana ireo lahatahiry ao anaty lahatahiry ao amin'ny iOS 9